သယ်ဆောင် - မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အင်ဂျင်နီယာဘယ်လ်ဂျီယံ
အမျိုးအစား "သယ်ဆောင်" မှမော်ကွန်းတိုက်
ဘေးထွက်လမ်းညွှန်များကိုထိန်းညှိဖို့စနစ်။ သယ်ဆောင်လိုင်းများ၏ပြောင်းလဲမှုကြိမ်အကြီးအကျယ်လျှော့ချနိုင်ပါ! ရရှိနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောမူကွဲများ - လက်စွဲ - လက်စွဲ၊
ကွင်းဆက်သယ်ဆောင် - အကျယ် 83mm
Published in ပြည်တွင်းသတင်း ကွင်းကြိုး
ကွင်းဆက်သယ်ဆောင် - အကျယ် 254mm
Published in ပြည်တွင်းသတင်း ခါးပတ်ကြိုး
အင်္ဂါနေ့, 14 မတ်လ 2017 by မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အင်ဂျင်နီယာ
ဒီပုလင်းဓာတ်လှေကားပုလင်းသယ်ဆောင်လိုင်းများအပေါ်ပုလင်းပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိမြှင့်။ ၎င်းသည်ပုလင်းများကိုလမ်းတစ်လျှောက်အထက်သို့ဆင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ထပ်သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိအကျယ်နှင့်အတူနှစ်ဖက်ချုပ်ကိုင် conveyors အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
Published in ပြည်တွင်းသတင်း ကုနျဓါတျလှေးခါး
ဤ pallet မိတ္တူကူးသူသည်အော်ပရေတာတစ်ခုအားအမြင့်တစ်ဝက်အမြင့် pallets (၃၀၀၀၀ မီလီမီတာ) ကိုအပြည့်အ ၀ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ် 3100 မှ 5% လျှော့ချ!
Published in ပြည်တွင်းသတင်း Pallet ကိုင်တွယ်ခြင်း
အောက်တွင် tag လုပ်ခဲ့သည် pallet
ဤ pallet dispenser သည် roller conveyor ပေါ်သို့အချည်းနှီးသော pallets များကိုထုတ်ပေးသည်။ အော်ပရေတာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် pallet ကုန်တင်ကားကိုရှောင်ရှား။